Colaad Dhici Lahayd Oo Caws Lagu Joojiyay. |
Colaad Dhici Lahayd Oo Caws Lagu Joojiyay.
Qowmiyadda Gamo ee ku nool dalka Itoobiya gaar ahaanna Magaalada Arba Minchi waxay dhaqan u leeyihiin marka ay dhacaan rabshado, qulqulatooyin, isku dhacyo iyo dagaallo bulshada dhexdeeda iney hab dhaqami ah ay u xalliyaan.
Warkan oo aan ka soo xigannay laanta Amxaariga ee BBC ayaa wuxuu sheegayaa sida uu dhigayo dhaqanka qowmiyadda Gamo goob kasta oo ay dad badan ku nool yihiin haddii ay rabshado ama dagaallo ka dhacaan oo dadka dhibka uu ka dhex dhacayna kala qabashadooda ay adkaato cid kasta oo qowmiyadda ka tirsan waxay gacmaha ku soo qaadanayaan caws ama caleemo qoyan.
Iyaga oo Cawska qoyan gacanta ku sitana taagni ama
jilba joogsi ayey ku sameeynayaan dadka ay dhibaatadu dhex mareyso hortooda, tallaabbadaasi oo ah tan ugu dambeyso caadada beeshaasi oo dhib kasta oo dhici lahaa looga hortago.
Waxaana ficilkaasi sameyn kara qof kasta oo beesha ka tirsan balse shuruudda laga rabo inuu buxiyi ayaa waxay tahay inuu qofku yahay qof da’ ajh isla markaana Lab ah.
Waxaana inta badan sameeya odayaasha, hoggamiyeyaasha diimaha iyo qof kasta oo ay da’diisu weyn tahay oo bulshada dhexdeeda sumacd ku leh.
Caws ama caleeyn qoyan waxay beeshu u taqaanna astaanta nabadda iyo joojinta colaadda.
Maalmihi u dambeeyey waxaa magaalada Addis Ababa ka dhacayey isku dhacyo beel ku saleysan oo intooda badan dhex marayey Oromada iyo Amxaarada.
Dhalinyarada magaalada Arba Minch oo ka careysan waxa ka socda caasimadda dalka ee Addis Ababa ee ay dhalinyarada Oromadu wadaan ayaa waxay sameeynayeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan rabshadahaasi iyaga oo marki dambe burbuin iyo boob hantiyeed u beddelay mudaharaadkooda.
Waxayna dhalinyaradu si gaar ah u bartilmaameedsadeen bangiyada Oromia International iyo Oromia Cooperative oo ay labaduba leedahay qowmiyadda Oromada.
Odayaasha beesha Gamo oo xaalku la fool xumaaday waxay bangiyadi la hor istaageen caws qoyan iyaga oo weliba qarkooda ay jilbaha dhulka dhigteen.
Ficilka ay odayaasha sameeyeenna waxay hor istaagtay dhalinyaradi careysneyd boobki iyo burburki ay bangiyadaasi u geysan lahaayeen.
Sadiqa Sime oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa wuxuu sheegay “damaca dhalinyarada inuu ahaa iney boob hanti iyo dhac ay magaalada ka sameeyaan gaar ahaanna bangiyada ay Oromadu leedahay waxaanna ku guuleysannay inaan dhalinyarada falkooda ka hor istaagno”
Wariyaha BBC ee warbixintan soo diyaariyeyna wuxuu sheegay “inuu indhahiisa uu ku soo arkay Bangiyada oo si caadi ah shaqadooda u wato wax dhib ahna uu soo gaarin.”
Mid ka mid ah dhalinyarada magaalada rabshadaha ka wadday oo la yirahdo Gensha Mada ayaa wuxuu sheegay “iney dhalinyaradu aad u careysnaayeen, qaaar ay ooynayeen qaarna heesa ay qaadayeen laakiin cadhada ay qabeen iyo wax ay sameeyn lahaayeenba ay hor istaageen Odayaasha dhaqanka.”
“Sida dhaqankooda uu yahayna qof Caws qoyan kula hor istaagay haddii aad dhaafto ama aad wax kale ku sameeyso waxaa bulshada la gala kulmayaa inkaar iyo sumcad xumo weligaa aan kaa hareyn” ayuu yiri.
Beesha Gamo waxay dhaqan ahaan u aaminsan yihiin haddii baryada Odayaasha aad iska dhaga tirto in uu halkaa habaar uu kaa soo gaarayo.
Odayaasha magaalada Arba Minch marka ay tillaaabbadaasi qaadeen saacad kaddib magaaladi ay xaaladdeedu kacsaneed waxay ku soo laabatay caadigeedi sideedi hore